Smart Business တစ်ခုဖြစ်ဖို့ဘာကြောင့်အရေးကြီးပါသလဲ ? Smart Business နဲ့ ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုဖတ်ပြီးဆွေးနွေးပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ 1 . Smart Business ဖြစ်ဖို့ဘာကြောင့် အရေးကြီးပါသလဲ ? အရာရာတိုးတက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ IT ခေတ်ကြီးမှာဘယ်အရာမဆိုမြန်မြန် နှင့် မှန်မှန်လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ကအဓိကကျနေတာဆိုတော့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်အလက်တွေကစနစ်တကျရှိနေဖို့ရန်အရေးကြီးတာမို့ ...
Cloud Computing Technology နှင့် သူ၏ အားသာချက်များ ယခုအချိန်အခါတွင် IT Technology သည် Industry Sector တိုင်းအတွက် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍ တွင်ပါဝင်လာသည်ကို လူတိုင်းသတိပြုကြမည်ဟုထင်ပါသည်။ ထို IT Technology ...
Customer Information Management Business တိုင်းမှာ Customer Information များ ထိန်းသိမ်းရန် ဘာကြောင့် အရေးကြီးတာလည်း ဆိုတာ နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆွေးနွေးသွားချင်ပါတယ်။ ဆွေးနွေးချက်လေးကို ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ် နဲ့ စတင်ပါရစေ။ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ...
IT Certification Road Map 1.Access yourself 2.What you want to be 3.Where are you 4.What are the T-Shaped Skills 5.IT ...
Japan Business Manner တစ်ဖက်လူအမြင်တွင်Impressionကောင်းစေရန် အလုပ်တွင်လုပ်ဆောင်ရန် လိပ်စာကဒ်လဲလှယ်ခြင်း ဖုန်းလက်ခံဖြေကြားခြင်း Impressionကောင်းစေရန် နှုတ်ဆက်ခြင်း မျက်နှာအမူအရာဆိုင်ရာအချက် တစ်ဖက်လူနှစ်သက်စေမည့်ကိုယ်အမူအရာ အရိုအသေပေးမှု အ၀တ်အစားအသွင်အပြင် အခြေခံနှုတ်ခွန်းဆက်စကားများ(otsukaresamadesu) အလုပ်တွင်လုပ်ဆောင်ရန် အစီအရင်ခံခြင်း(報告) အကြောင်းကြားခြင်း(連絡) တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း(相談) လိပ်စာကဒ်လဲလှယ်ခြင်း လိပ်စာကဒ်လဲလှယ်ခြင်းစည်းကမ်း ...
Leadership style 1. Shark (サメ型) Great emphasis on achieving results Keep track of until achieving results 成果を出す事に重くを置く/ 獲物を取得するまで追い続けるサメタイプ Strength : ...